Semalt: Indlela Ukususa Spam Ukudluliselwa? Amathiphu alula
I-traffic yokudlulisa ugaxekile ibe yinto yokuhlangana kwansuku zonke kubasebenzisi abaningi be-intanethi. Ukuqeda lolu hlobo lomgwaqo kubalulekile kuwo wonke umnikazi wewebhusayithi noma opharetha wenhlangano ye-SEO. Ithuluzi le-Google Analytics linendlela eziningi zokususa ugaxekile we-referrer kusuka ku-GA yokudlulisela umbiko. I-traffic spam yayinomqondo omdala wesicathulo esimnyama injini yokusesha . Abantu bangasebenzisa le ndlela ukuze bamangale amaklayenti abo ekwenzeni amawebhusayithi abo afinyelele ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, kungabangela ukubonakala kwamanga okungabonakali, okubangela ukulahlekelwa okukhulu kumakhasimende abo angabhekeki. Ukuqonda ugaxekile wokudlulisela kubalulekile kuwo wonke umuntu owenza i-e-commerce.
U-Nik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo YokuThengela Amakhasimende Semalt , uchaza lapha ngalezi zindaba eziphathelene nalokhu.
Ukuqonda ithrekhi yokudlulisela
Ukudlulisa izimoto izivakashi ezichofoza izixhumanisi kusayithi lakho kusuka kwamanye amawebhusayithi. Lapho amawebhusayithi axhumanisa kusayithi lakho, kukhona ukuxhumana okuqondile kwesizinda, okungaholela ekuhambeni kokuvakasha okuqhubekayo. Isibonelo, umuntu angachofoza isixhumanisi kuwebhusayithi yakho kusuka kwisizinda njengewebhusayithi ka National Geographic's. Ukwaziswa kwesizinda sakho kuzoba kwisayithi likaNat Geo ngoba usuke ube ngumdlali weNat Geo.
Ugaxekile lokudluliselwa kabusha yilo mgwaqo ovela ezizindeni ezingahle zixhumanise kuwebhusayithi yakho. Amanye amaqhinga angase afaka ukuhambela kwangempela okuvela kubantu abangokoqobo. Kwezinye izimo, ugaxekile wokudlulisela uzama ukukhohlisa ikhodi yakho yokulandelela ye-GA ekuqopheni ukuvakashelwa kwekhasi okungamanga..Kuzo zombili izimo, i-GA yakho ibala ukuvakashelwa kwekhasi okungenzeka ukuthi kungabonakali ngempela njengengxenye yezivakashi zakho. Ezimweni eziningi, i-spam yokudlulisela ingabonakala njengezimpikiswano zomoya noma ngisho nokudluliswa kwezinkukhu:
Ukuhanjiswa kwezinkwa: Ziyi-bots ikakhulukazi. I-Traffic evela ebhokisini uma ibuye ingabi necala. Bafika kuwebhusayithi yakho ngesikhathi sesitimela esisemthethweni.
Ukudluliselwa kwe-Ghost: Lokhu akuvakashele iwebhusayithi yakho. Noma kunjalo, bayakwazi ukukhohlisa i-Google Analytics yakho ukubhalisa ukuvakashelwa okungalungile.
Wonke ama-webmaster adinga amathuluzi abalulekile okubhekana nomgwaqo ongaveli kumakhasimende wangempela. Isibonelo, amanye amathuluzi abasebenzisi bewebhu abasebenzisa ukwenza amasevisi we-backlinking angasiza abantu ukuthi basuse ugaxekile wokudlulisela. Isibonelo, ungasebenzisa ezinye zazo kulethebhu yezilungiselelo zomlawuli.
Kumathebhu we-admin, ungakwazi ukuvula amasevisi wokuhlunga bot. Kukhona idatha yogaxekile kanye nezicabucabu ezivame ukukhahlela iwebhusayithi ngezizathu ezihlukahlukene. Ukwakha izihlungi ze-bot zenkambiso kungasiza ekugcineni ezinye zalezi zindlela zemoto ezingase zingavunyelwe ngokusemthethweni. Ezinye izizinda ezinjenge Semalt zinomlando owaziwayo wokuphonsa ukuhlaselwa kogaxekile.
Kubalulekile ukusebenzisa umhlinzeki we-imeyli ohlinzeka nge-imeyili ophephile angakwazi ukuhlunga izimoto ezithile zokudluliselwa ezivela kumawebhusayithi. Bangenza sonke isikhathi sesiphequluli sivikeleke futhi sivikele amaklayenti akho ekuhlaselweni kogaxekile.
Ukugaxekile kogaxekile kuyinkinga enkulu ebhekene neningi labasebenzisi be-intanethi. Ezinye zezinkampani ezimnyama ze-SEO zivame ukusebenzisa ama-spac tactics wokudlulisela ukuhlinzeka ngemiphumela yabo esheshayo. Lo mgwaqo awunaso isisekelo sokusebenza kwawo. Ungabhekana nezinye izijeziso uma uzama ukulinganisa usebenzisa i-spam ithrafikhi. Lesi siqondiso singakusiza ukuba ugweme ukuhanjiswa kwezimoto Source .